काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने भनी अमेरिकालाई स्पष्ट भन्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मालगायतसँग एसपीपी छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देश गरेको हो ।
– एसपीपीसम्बन्धी सबै कागजात माग
यसैगरी, समितिले सरकारसँग एसपीपीसँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र माग गरेको छ । समितिको बैठकमा एसपीपी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका थिए । समिति सभापति पवित्रा निरौलाले एसपीपी अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्र मागिएको बताइन् । उनले छानबिन समिति भने नबनाएको जानकारी दिइन् । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)सँग सम्बन्धित सैन्य सम्झौता प्रस्ताव अगाडि नबढाउने बताए ।
मन्त्री खड्काले एसपीपीसँग सम्बन्धित सैन्य सम्झौता प्रस्ताव नेपाललाई स्वीकार्य नहुने भन्दै राष्ट्रिय हितमा नभएकाले अगाडि नबढाउने स्पष्ट पारे । नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासबाट यस विज्ञप्ति आइसकेको भन्दै यस थप चर्चा नगर्न उनले समितिका सभापतिलाई आग्रह गरे । ‘यो’ मा स्पष्ट आइसकेको छ । यो कार्यक्रम हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो अगाडि बढ्नेछैन र बढाइनेछैन,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय हितमा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कार्यान्वयन हुँदैन भनिसकिएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले कार्यान्वयन हुँदैन भनेपछि नहुने जिकिर गरे ।
‘तत्कालीन रूपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनरसिप थिएन,’ शर्माले भने, ‘पछि सन् २०१९ मा इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी भन्ने कार्यक्रम आयो । त्यसमा गएपछि हामीलाई असहज पर्छ कि भनेर रिभ्यु गर्न पत्र नै लेखेका छौं ।’ उनले समितिमा एसपीपीपछि पाएको सहयोग समेत उल्लेख गरे । ‘हामीले ढाँट्नुपर्ने केही छैन । सैन्य पार्टनरसिप गर्न नपरोस् भनेर विभिन्न कार्यहरू अघि बढाइएका छौं,’ उनले भने, ‘यही पार्टनरसिपअन्तर्गत चारवटा जहाज लिएका छौं । दुईवटा आइसकेका छन्, अरू सर्भिसको क्रममा छन् । एउटा एयर एम्बुलेन्स आउँछ । यो कार्यक्रमबाट कुनै हतियार र पैसा लिएका छैनौं ।’ एसपीपी आईपीएसको अंग बनेपछि भने त्यो नेपालको हितमा नहुने उनको भनाइ छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास नहुने बताए । छलफलमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि हुन दिन्नौं भनेर स्पष्ट पारिसकेको बताए । नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपी अहिलेसम्म भएका कुरा छानबिन गर्न माग गरे ।
छलफलमा बोल्दै उनले एसपीपी फरक–फरक निकायबाट फरक–फरक कुरा आएकाले यसको छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । ‘एक समय सम्झौता गरेको भन्ने, अर्कोबेला होइन भन्ने यस्ता कुराले हाम्रो विश्वसनीयतामा आँच आउँछ,’ रावलले भने, ‘अमेरिकाले यसलाई आफ्नो इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग भनेको छ । हामी होइन भन्छौं । यो सम्झौता कहिले, कसले ग-यो ? समिति बनाएर छानबिन गरौं ।’ एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपीपी विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘म रक्षामन्त्री भएको बेला एसपीपी आईपीएसको अंग रहेको भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई रोकेको हो,’ उनले भने, ‘एसपीपीमा भएका सबै प्रक्रियाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्छ । कसैका लागि दण्डित गर्नेभन्दा पनि कसको पालामा के भयो भनेर हेक्का राख्न जरुरी छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोक्नुपर्ने बताए । किरातीले अमेरिका यति धेरै कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको हुने भनिएको अमेरिका भ्रमण रोक्न माग गरे ।
अहिले यसमा भ्रम रहेकाले स्पष्ट गर्न भनेर कुन सरकार र कुन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न अनुमति दिएको हो भनेर उनले प्रधानसेनापतिलाई सोधेका हुन् । कुन सरकार र कुन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न अनुमति दिएको हो भनेर प्रधानसेनापति शर्मासँग प्रश्न सोधेका थिए ।
कांग्रेस सांसद सुजाता कोइरालाले अमेरिका र भारतसँगको प्रसंग आउँदा राष्ट्रवादको नाममा अनेक विरोध हुने गरेको बताइन् । चीनको प्रसंग आउँदा भने त्यस्तो विरोध नभएको उनको तर्क छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।